Madaxweynaha Lazio oo farxad galiyay kooxaha Barcelona, Real Madrid iyo Manchester United – Gool FM
(Lazio) 21 Nof 2018. Madaxweynaha kooxda Lazio Claudio Lotito ayaa albaabada u furay lin laacibka reer Serbia ee Sergej Milinković-Savić uu ka dhaqaaqi karo garoonka Stadio Olimpico xiliyada soo aadan.
Laacibka reer Serbia ee Sergej Milinković-Savić ayaa wuxuu yaboohyo kala duwan ka helayaa kooxaha waaweyn ee yurub sida Barcelona, Real Madrid iyo Manchester United.
23 jirkan ayaa wuxuu xili ciyaareedkan kasoo muuqday kooxdiisa Lazio 15 kulan ee kala ah 11 horyaalka Serie A iyo 4 kulan ee ah tartanka UEFA Europa League, balse kaliya wuxuu dhaliyay 1 gool wuxuuna sidoo kale caawiyaay gool kale.
Inkastoo uu dhawaan saxiixay heshiis cusub ee ilaa iyo 2023, hadana madaxweynaha kooxda Lazio Claudio Lotito ayaa qiray sida ay u adag tahay in laacibka reer Serbia uu sii joogo Stadio Olimpico, maadaama ay saxiixiisa xiiseenayaan kooxaha waaweyn ee qaarada yurub ay sidoo kale ku jiraan Juventus iyo AC Milan.
“Kubada cagta ee maanta, way adagtahay in ciyaaryahan kasta uu baaqi kusii ahead hal kooxda xirfadiisa kubada cagta, laakiin anaga ahaan Lazio waxaan sameyneynaa shaqo fiican, ciyaartoydeenu waxay muujiyaan farxad weyn ee ku aadan dhanka kooxda”.
“Mustaqbalka Milinković-Savić, nasiib daro Lazio ma haysato awood dhaqaale ku filan sida Barcelona iyo Real Madrid”.
“Marka xaalada taagan ay maslaxad inoogu jirto, isla markaana aan helno dalab aan la diidi Karin, waan wajihi doonaa”.